PressReader - Isolezwe: 2018-07-12 - I-Gift of the Givers ihlenge umasipala kolwamanzi
I-Gift of the Givers ihlenge umasipala kolwamanzi
Isolezwe - 2018-07-12 - IZINDABA - INTATHELI YESOLEZWE
SEKUSIZE ukuba kungenelele inhlangano esiza abakhungethwe izinhlekelele emhlabeni, iGift of the Givers, enkingeni yesomiso kaMasipala uMzinyathi ukuze uqhubeke nohlelo lwamanzi ezindaweni zomasipala abahlanu abangaphansi kwawo.
Lokhu kugqame ngesikhathi izikhulu zale nhlangano neziphathimandla zikaMasipala waseMzinyathi zihambele eNtinini, eNquthu ukuyokwethula ingqalasizinda yezigidi zamarandi yokuhambisa amanzi kubantu.
Lolu hlelo lwethulwe ngaphansi kwenkosi yakwaJiyane ngemuva kokuthi uMzinyathi uzithole usenkingeni yokuqhubeka nohlelo ngenxa yenkohlakalo efinyelele kuR200 million.
IMeya yaseMzinyathi, uMfundisi Petros Ngubane, ithe kubethule umthwalo ukuba kungenelele abeGift of the Givers ngoba bazoqhubeka nokufaka amapayipi asala dengwane ngemuva kokuba umkhandlu ukhungathwe inkohlakalo.
“Laba bantu beGift of the Givers bazosilekelela ekutheni bathathe umsebenzi osale kumasipala wokulwa nesomiso baqhubeke nawo. Umasipala kwakufanele uphothule lolu hlelo eminyakeni eyedlule kodwa inkohlakalo yokukhwabanisa iphazamise konke lokhu njengoba uhlelo lungazange lusaqhubeka,” kusho Ngubane.
Le nhlangano ifike nemishini eseqophelweni eliphezulu yokuthola amanzi angaphansi komhlaba.
Indawo yaseNtinini kutholakale ukuthi nakuba iyingxenye yokukhahlamezwa isomiso kodwa inenqwaba yamanzi angaphansi komhlaba.
Udaba lwale nkohlakalo yamanzi ludale umsindo eMzinyathi ngemuva kokhetho lwango-2016.
Lokhu kwadala ukuthi kubhekanwe ngeziqu zamehlo phakathi kwe-ANC ne-IFP.
Umsindo wawufaka phakathi nombiko wophenyo wale mali yohlelo lwamanzi enguR200 million.
Ngenxa yalokhu kwagcina kujikijelwana ngamazwi, kusolwa uNgqongqoshe uNomusa DubeNcube ngokuthi ubenesandla ekutheni kuqalwe phansi ukhetho ngoba evika ukuthi i-IFP ithathe izintambo ngoba izoveza amahlazo ngenkohlakalo yamanzi. Nokho uNkk Dube-Ncube wakuphika lokhu wathi kube umsindo wamaqembu ezepolitiki wokuhluleka ukuhlalisa umkhandlu waseNquthu kwagcina kuqalwa phansi ukhetho.
Ephawula ngalokhu oweGift of the Givers, uMnuz Abba Mkhize, uthe bakwenze lokhu ngemuva kokucelwa uMasipala wesifunda uMzinyathi ukuthi bangenelele.
“Sesiqalile kuWard 3, sithenge amapayipi angu-23 okudonsa amanzi sizimisele ukuqhubeka siwafake kuwo wonke ama-ward, amanzi siwadonsa ngogesi abe esephumela ethangini bese esabalala kompompi,” kusho uMkhize.